Xiriirinta Kala-goynta - Shahaadooyinka Ellicott
Nidaamyada Waxyaabaha Cusboonaysiinta
Waxaa loogu yaqiinay qulqulka iswada ee adeegsanaya ruqsad wadida isweydaarsiga ee 'Starwheel ™ kaas oo baabi'ineysa shaqooyinka adag ee fiilada. Ku saleysan Kansas, USA.
Guuritaanka Mud: Dib-u-habeynta harooyinka Waaweyn wasakhoobeen.
Ellicott Dredges wuxuu dhisay dhamaan dhulalkii goynta ahaa ee waligood ay iibsadeen kanaalka Panama - laga soo bilaabo dhismihii asalka ahaa ilaa maanta.
Ellicott Dredges wuxuu u keenay mashiinno duugoobay wax walboo ay ka mid yihiin mid ka mid ah qashin-qubka Corps ee la dhisay qarnigan, iyo sidoo kale qashin-gooyeyaasha.
Qandaraasleyda Dhumay - Waqooyiga Ameerika
Hogaamiyaha Qaranka ee Kala Bixinta Deegaanka, Dib-u-dejinta, iyo Caabudwaaq Cashman wuxuu kaloo sameeyaa Qashin-Bixinta Dayactirka, Dib-u-kobcinta Xeebta, iyo Hagaajinta Caasimadda, iyo Qodista Badda iyo Badda ee dalka iyo gudaha.
Dhamaan heerarka badalashada tuubbada birta aan go'aynin iyo marinka badda. Ku saleysan Braintree, Massachusetts USA.
Harooyinka Waaweyn & Dooxada
Qandaraasle caalami ah oo horumarsan. Saddex Ellicott qashin-gooyo ayaa ku jira Doomaha Waraha Waaweyn iyo Dock. Ku saleysan Oak Brook, Illinois USA.
Qashin qubto buuxda iyo shirkad qashin qub ah oo ku taal Rockport, Indiana, oo ku takhasustay maareynta agabka, maareynta barkadaha ashkarka, dayactirka barkadaha, iyo nadiifinta barkadaha.
Xalka la hubo ee badda lagu caddeeyey ee diiradda saaraya xeebta waarta iyo dib u buuxinta dhul-badeedka caadiga ah.
Muddo ka badan 20 sano, Southwind Construction Corp. waxay bixineysay adeegyo qulqulaya iyo deegaanka. Waxay ku saleysan tahay Evansville, Indiana USA.
Qandaraasleyda Dhumay - Gobollo Kale
Shirkadda Qandaraaslayaasha Arab
Shirkadda ugu weyn ee dhismaha ku leh Bariga Dhexe waxay isticmaashaa Ellicott si gaar ah duulimaadyadooda.
Qandaraaska Hall wuxuu inta badan diirada saaraa howlaha qulqulka iyo kala qeybinta madaniga. Mashaariicda khasaaraha badan ayaa laga dhammeystirey Australia oo dhan, oo ku saleysan Mooloolaba, Queensland, Australia.
Waxay adeegsaneysaa bur-burka Ellicott oo cusbo miinadu ku jirto deegaan aad u adag - Badda Dhimatay.
Chemours waxay u isticmaashaa qodista macdanta ugu weyn Waqooyiga Ameerika qodista macdanta (TiO2).
Shirkadda FMC waxay adeegsanaysaa Ellicott Wheel-Dragon dredge B890 oo loogu talagalay macdanta ashkadda soodhada leh.
Iyada oo lala kaashanayo ASARCO, Inc., waxay maamushaa Montana Resources, oo ah shirkad macdan qodista ka samaysa Butte, Montana, USA.
Eagle Waqooyiga Ameerika
Adeeg dhammeystiran, tuubbo-bixin iyo qandaraas dib-u-celin. Ku saleysan Boise, Idaho, USA (U adeegidda Galbeedka Mareykanka)
Waxyaabaha Kale ee Kala Duwan
Shuraakada Ellicott ee Muddo kabadan 50 Sanad Qaadasho Xalka Awooda Saxda ah ee Looga Dalbanayo Degaanada Kala Duwan Dhamaan Dunida
Qalabka dayactirka ee Ellicott wuxuu ku yaal Port Harcourt, Nigeria oo leh awooda lagu rari karo qaybo ka mid ah aagga Lagos maalin kasta.
Waxay siisaa nidaamyada iswada ee ku saleysan PLC baaldiyo iyo qashin-gooyo-jaridda. Meel keliya oo loogu talagalay qalabaynta iyo warshadaha iyo warshadaha.
Meel gaar ah oo loogu talo galay taariikh nololeedkii Ellicott Dragon® ee Mexico.
Pakistan - Nidaamyada Cresguard (Pvt) Ltd.
Meel gaar ah oo loogu talagalay Ellicott Dragon® ee ku yaal Pakistan.
Isha gaarka ah ee Ellicott Dragon® ee Masar.
Xiriirka qulqulaya ee reer Argentine.
Turkiga - Guler Marine
Waxaa laga helay ilko la yiraahdo Ellicott Dragon® ee ku taal Turkiga
Muraayad weyn oo Mareykan ah iyo soosaar ciid ciid ah ayaa waxay ku tiirsan tahay Ellicott dredges oo loogu talagalay macdan qodista.
Galbeedka Afrika - Saadka & Caawinta, SA
Isha isha laga helo Ellicott Dragon® ee ku taal Francophone, Galbeedka Afrika
Ururka Daweynta Reer Galbeedka (WEDA)
"Burburinta Dhaqaale adag iyo Deegaan Nadiif ah."
Kala Bixinta Dunida